Ducadii hooyo dhimatay. ? Oo Geeriyooday | Gaaban
U ducee hooyo dhimatay Waxay naga caawin kartaa inaan gaarno raaxada aan u baahanahay daqiiqad xun.
Hooyadiisa waa mid ka mid ah xanuunnada ugu adag ee uu bini'aadamka dareemi karo maxaa yeelay wuxuu naftiisa u lumiyaa kii nolosha siiyay, kii hagiyay oo ku wehelisay kobcintiisa. Waa murugo in ay adag tahay in laga adkaado, laakiin iyadoo la kaashanayo xagga ruuxi ahaaneed ee ducadu u muuqato, si dhakhso ah ayey u dhici kartaa.
Tani waa duco muhiim ah oo, xitaa haddii aan ka fikirno ama aan dooneynno waligeenba, runtu waxay tahay annagu garan mayno waqtiga aan dareemeyno inaan u baahan nahay inaan tukanno salaadan.
Taasi waa sababta iimaanka acatolic, ay jiraan jumlado faahfaahsan oo sax ah oo aan ula tacaali karno xaalad kasta oo aan ku jirno.
1 U ducee hooyo dhimatay Muxuu yahay?
2 1) Duco loogu talagalay hooyo dhimatay
3 2) Duco loogu talagalay hooyo dhimatay
4 3) Salaadda hooyaday jannada ku tukato
4.1 Goormaan tukanayaa salaadda?
U ducee hooyo dhimatay Muxuu yahay?
Tukashadani waxay yeelan kartaa ujeedooyin dhowr ah, mid ka mid ah waa in la helo bartamaha bartamaha salaadda, raaxada aan ubaahanahay, ujeedo kale iyo laga yaabee midka hela xoog badan awood inuu yeesho xiriir xoogaa xiriir ah dhinaca kale, tani waxay ina siineysaa amniga in sida macaan oo kalgacal u leh sida hooyadu tahay, ay tahay meelaha jannada ku nasan, nabad ku nasan iyo raaxayso faa'iidooyinka ku lahaa isagoo nolosha xaq Ilaah hortiisa.
Ujeedo kale ayaa ah inaan awoodno inaan u mahadceliyo farxadda haysashada hooyo oo aan weydiisto nasashadeeda weligeed ah. Tani waa muhiim maxaa yeelay waa wadada lagu dareemo nabada nafteena iyadoo la ogyahay in salaadaheena ay ka dhigayaan xubnaheena in ay helaan iftiinka ka baxsan geerida.
1) Duco loogu talagalay hooyo dhimatay
«Rabbi Ciise Masiix, Wiilka Ilaah, oo doonayay inuu hooyo ku yeesho dhulka, Maryantii bikradda ahayd; indho naxariis leh ku fiiri addoonkaaga N…, oo aad uga yeedhay laabta reerkayaga.
Iyo baryada Saint Mary ee Guadalupe, u ducee jacaylka ay had iyo jeer ku haysay dhulka, oo taas ka dhig, xagga jannada, way sii wadi kartaa inay na caawiso. Soo qaad kuwa aad uga tagtay dhulka si aad u ilaaliso naxariistaada. Kaaga noolow oo xukumay weligiis iyo weligiis.
Badanaa, jumladaha loogu talagalay hooyo dhimatay waa kuwa ugu quruxda badan.
Waxaan hadda haysannaa moodello badan oo salaadda ah iyo, ikhtiyaarro badan, ayaa ah jumlado gaagaaban oo si fudud loo xasuusto iyo maxaad sameyn kartaa markasta.
Duruufaha kelinimada, mararka qaarkood, waxaan dooneynaa inaan kali ahaato oo aan qarash gareyno qormadeena si aan u xasuusano qofkii aan jeclaa, waqtiyadaas waxaa muhiim ah in la awoodo in la kiciyo mid ka mid ah salaaddahan aan u baahnayn waqti badan laakiin taasi waxay naga caawin kartaa inaan ka adkaano murugada oo aan helno nabada iyo xasiloonida oo lagu gaari karo oo keliya dhinaca Ilaahay.
2) Duco loogu talagalay hooyo dhimatay
«Hooyo hooyo, waxaan rabaa inaan sheego
Waxaad ahayd hage iyo waqooyiga noloshayda,
Waad ku mahadsan tihiin inaan ku jirno adduunkan,
Waad ku mahadsan tahay kii na siiyay,
Waxaa mahad leh kii ina baray,
Waad ku mahadsan tihiin inaan nahay waxaan nahay
waad ka tagtay, samada baad gashay
Waxaad ku gaadhay himiladaada nolosha,
Waxaad caawisay deriska iyo kan baahan,
had iyo jeer fiiro gaar ah leh oo ka warqaba wax walba,
sida loo ilaawo waxyaabo badan oo qurux badan, codkaaga, qosolkaaga ...
Maanta Aabe, adiga ayaan ku weydiinayaa
Is-hoosaysiinta iyo baryadayda maqal
oo aad u fiirsatid codka tukashadayda,
Bar hooyaday jidka,
si uu u garab joogo Rabbigaaga,
U yeel iyada inay ku nasato boqortooyada jannada.
Hooyaday, ubaxu qabrigiisa qabow
Xanuunka xusuustaada ayaa kaa baxa
duco naftaada, Ilaah baa aqbalay.
Iftiinka weligeed ah waa iyada, iyada nabad ha ku nasan karo.
Ma jeceshahay ducadan adag ee hooyadeed dhimatay?
Hooyooyinku waa caruur ay ka buuxaan macaan iyo jacayl had iyo jeer xaqiijin doona wanaagga carruurtooda. Tusaalaha hooyo tusaale ah waa isla hooyada Rabbigeenna Ciise Masiix, oo ay ka buuxsantay Ruuxa Quduuska ah oo yaqaan sida loo jeclaado oo loo aqbalo wiilkeeda.
ka Hooyooyinku waa qayb muhiim ah oo qof walboo canab ah iyo markii qaybtan oo leh hal abuurka Ilaah ka tago wax aan waxba tarayn oo ay ka buuxsameyso oo keliya tukashada waxaan sare u qaadnaa fikradda ah inay iyadu lafteedu ku dhowdahay Ilaah daryeesho carruurteeda.
3) Salaadda hooyaday jannada ku tukato
«Oh aabe, raaxada kaliya ee daqiiqada weliga ah ee xanuunka.
Waxaan u baroorannay maqnaanshahaada, hooyo qaali ah, xilligan murugada leh,
Xanuun badan, xanuun badan, waxaad qalbigayaga ugu tagaysaa faaruq.
Sii Eebihiis dhaafid dhaaf dambidhaafkaaga inuu dhaafo albaabka geerida,
Ku raaxayso nuurkaaga iyo nabad waarta.
Allaha awooda badan, Waxaan gelinay gacmahaaga jacaylka. Ku socota hooyadeen, oo laguugu yeedhay noloshan inay iska ilaaliso. Sii jannada inteeda kale ee jannada ku haysa jannada. Hooyaday, waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaad ahayd hagaha iyo waqooyiga xooggayga,
Waad ku mahadsan tihiin inaan dunidan nahay, mahadsanidiin kii ina siiyay noolaha,
Waad ku mahadsan tihiin kuwa na baray, waad ku mahadsan tihiin inaan nahay waxaan nahay,
Adiguna waad ku mahadsan tahay markasta waxaan noqon doonaa qof wanaagsan oo aad ka tagtay, jannada tagtay,
Waxaad ku dhammaystirtay himiladaadii dhulka, waad caawisay dadka kale iyo kuwa baahan,
Had iyo jeer feejignow oo ka warqabo wax walba, sida iska dhego-tiro waxyaabo badan oo qurux badan, codkaaga, dhoola cadeyntaada ...
Maanta Aabbahay, waxaan ku weyddiisanayaa is-hoosaysiin weyn, maqal baryadayda
Oo aad u fiirsatid codka tukashadayda, Hooyada u sheeg jidka,
Inaad ku garab istaagto Rabbi, U yeel iyada inay ku nasato boqortooyada jannada.
Hooyaday, ubaxu qabrigiisa qabrigiisa way qallalan yihiin, Oo ilmadaadii xusuustuna way dhammaatay
Ducada naftaada, Ilaah wuu aqbalaa. Iftiin weligiis ah ha kuu iftiimiyo, nabad ku naso.
Waxaan aad u jeclaan salaaddaan hooyaday jannada ku dhimatay.
Hooyadu waa saaxiib aad u soo jeesan karto wakhti kasta, si kasta oo aad u xumaato carruurta, hooyooyinka marwalba waxay leeyihiin gacmo furan oo ay ku soo dhoweeyaan carruurtooda.
Markay hooyooyinkan jannada kujiraan, way sii jeclaanayaan oo diyaar bay u yihiin inay na dhagaystaan, na caawiyaan oo ay sii wadaan tilmaantayada.
Intaas ka dib oo dhan waan fahmi karnaa inaysan jirin meel ka fiican hooyadu inay noqoto mid u dhow isla Rabbiga ah Ilaaha Aabbaha ah.
Goormaan tukanayaa salaadda?
Salaadaha waa la sameyn karaa markasta.
Maahan daruuri inay qasab tahay in codka kor loo qaado ama shumacyada la shido, laakiin in aan qalbiga ka duceysan karno oo ducada qumman tahay. Intaa waxaa sii dheer, waxa kaliya oo ay tahay inaad lahaato waa iimaan nool oo soo jeeda in salaaddayada Meesha ay tagayaan
Shumacyada, meesha, haddii aan ku qabanno cod hoose, cod sare ama maankayaga, waa faahfaahinta kaliya ee aan ku arki karno xilligan, laakiin si kasta oo ay tahay salaadda markasta waa la sameyn karaa markasta.
U soo ducee ducadan hooyaday dhimatay oo jacayl badan leh.